Iflethi okanye indlu ekwicomplex esecaleni - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex esecaleni
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTika
Indawo yethu enefenitshala “likhaya elikude nekhaya,” elimi ekupheleni kwendlela emxinwa ekwithambeka elijonge kwichibi elihle laseFewa. Iluncedo ngendlela emangalisayo—uhambo lwemizuzu eli-10 kuphela ukuya echibini lasePohkara, iivenkile kunye neendawo zokutyela ezibonelela ngesidlo esihle—kodwa izolile kwaye ibucala. Uyoyithanda indawo yam ngenxa yebhedi etofo-tofo, ikhitshi ligqibelele linembono entle, imeko yosapho, igadi entle enkulu. Indawo yam ilungile kubatshati, abahambi bebodwa, abahambi beshishini, kunye neentsapho.
Ukusuka kwindawo esikuyo, unokufikelela kwimisebenzi emininzi eyaziwa ngokuba yi-Pohkara - ukuhamba ngeenyawo, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela inqwelo moya, ukukhwela ibhayisekile, njl.njl. Kukho iintlobo ngeentlobo zeevenkile onokuziphonononga ezigxile ekukhuthazeni ubugcisa bendawo abavela kwiinduli ezingqonge iPohkara, kunye neendawo zokutyela ezilungileyo. ezikhuphisana nendalo yokupheka kwezinye zezona khitshi zibalaseleyo zaseAsia naseYurophu.
Xa ufuna “ixesha lokuphumla,” unokuphumla kwindawo ebanzi, usebenze egadini, ulime imifuno ekhethekileyo yendalo, okanye uvune imifuno kunye nemifuno ekhula apho kwaye wenze ukutya kwakho okukhethekileyo kwigumbi lethu lokuphekela. .
Le ndlu inekhitshi esebenza ngokupheleleyo enefriji ukwenzela ukuba kube lula kuwe naxa ufuna isidlo esikhethekileyo esiphekwe ekhaya. Kukho i-24/7 i-wifi ekhawulezayo, amanzi ashushu kunye nombane (ukuqala ngo-2017, i-Pohkara ayisayi kuba nokuphuma kombane). Iilinen zokulala kunye neetawuli zinikezelwa.
Iflethi yethu ikwindawo ethe cwaka, uhamba nje imizuzu eyi-10 ukuya echibini lasePohkara (okanye imizuzu eyi-2 ngebhayisekile). Yonke into entle nge-Pohkara ifumaneka lula ukusuka eflethini yethu. Le ngingqi ngokuyintloko iyinyani iNepali, iindwendwe ezihlala apha ngethuba lokufunda ngakumbi ngale nkcubeko ikhethekileyo nabantu bayo abanobubele.
Umbuki zindwendwe ngu- Tika
Isakhiwo seflethi singabanikazi kwaye sigcinwa sithi. Sikwahlala kwenye yeeflethi okanye izindlu ezikwicomplex zesi sakhiwo kunye nonyana wethu, uBikalpa. Sisoloko sikhona ukuze siphendule nayiphi na imibuzo onayo, okanye sikunike amacebiso okwenza utyelelo lwakho ePohkara lube yinto engalibalekiyo.
Isakhiwo seflethi singabanikazi kwaye sigcinwa sithi. Sikwahlala kwenye yeeflethi okanye izindlu ezikwicomplex zesi sakhiwo kunye nonyana wethu, uBikalpa. Sisoloko sikhona ukuze si…